Alikho icala ekugodlweni kwemininingwane ophenyweni | Bayede News
Home/ iBayede Kuleli Sonto/Alikho icala ekugodlweni kwemininingwane ophenyweni
U-Advocate uBusisiwe Mkhwebane
NGOKOMTHETHO uma kwenzeke icala uphenyo lokuqala olwandulela olukhulu alukwazi ukubuyekezwa. Isibonelo salokho ngokwenzeka ecaleni likaGamede v Public Protector 2019. Owayefake icala uGamede wayeyilungu lesigungu esiphezulu kuhulumeni wesifundazwe esifundazweni iMpumalanga enguMphathiswa woMnyango Wezolimo, Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya.UMvikeli WoMphakathi wathola isikhalo sokungaphathi kahle, inkohlakalo nezinye izinto ezaziphambana nomthetho okubikwa ukuthi zazenziwa ngowayefake icala okwabe kunguGamede.
Ngenxa yalokho uMvikeli WoMphakathi waqala uphenyo oluncane ukubheka ukuthi izinsolo ezibekwayo ziyabambeka yini wazisa noGamede ukuthi uma uphenyo lumthinta kumele alindele ukuthi uzonxuswa ukuba azonikeza ubufakazi. UGamede wahluleka ukubekezela kwathi ngesikhathi sophenyo lokuqala, wacela ukunikezwa ulwazi oluthile nemiqulu.UMvikeli WoMphakathi wanqaba ukudlulisela lolu lwazi kuGamede. Ngenxa yalesi sizathu uGamede wafaka isicelo ngokulandela umthetho iPromotion of Administrative Justice Act 3 of 2000 (PAJA) ukucubungulisisa kahle isinqumo sokuchithwa kwesicelo sakhe. Leso sicelo sachithwa kwadingeka ukuba uGamede akhokhe izindleko zaso.
UMehluleli uDe Vos wanquma ukuthi umsebenzi wokuthi kuqalwe uphenyo ukuze kutholakale kunamaphuzu azwakalayo futhi enele ukuze uMvikeli WoMphakathi athathe isinqumo ngokuphethelene nezinsolo ezingena ngaphansi komsebenzi wakhe, azikazi ukuthathwa njengezinqumo ezingabuyekezwa ngokulandela umthetho iPromotion of Administrative Justice Act 3 of 2000.
Kulokhu okwakuphambi kwenkantolo okungamaqiniso, uMvikeli WoMphakathi wayengakaze kube khona isinqumo asithathayo, futhi asikho nesinqumo esithinta ukusebenza esasithathiwe. Kwakungekho ukuphambana okukhona ngokuthi uGamede wayenalo ilungelo lokuthola imininingwane ayeyidinga ukuze akwazi ukuvikela ilungelo lakhe ngoba lokho ngokuhamba kwesikhathi kwakuzodingeka ophenyweni.
Kwanqunywa ukuthi isinqumo soMvikeli WoMphakathi sokungamniki uGamede yonke imininingwane ayeyidinga ngaleso sikhathi kwakungekho lapho ikuphambana khona nomthetho.Akukho esingathi kwakungekho emthethweni ngesinqumo soMvikeli WoMphakathi sokuqoma ukunqaba ukudlulisela ulwazi kuGamede ngesikhathi sokuqhubeka kophenyo. Ngakho ke kwatholwa ukuthi akukho okwenzeka esingathi akubanga nabulungiswa ngokuthi uGamede anganikwa imininingwane.
UDavid Matlala ungummeli oneziqu zeBProc (University of the North) LLB (Wits) LLM (UCT) LLM (Harvard) LLD (Fort Hare) HDip Tax Law (Wits) unguSolwazi kwezomthetho e-University of Fort Hare.